EthOS: forogo yeUbuntu yakagadzirirwa cryptocurrency kuchera | Linux Vakapindwa muropa
ethos iko kugoverwa kweLinux kwakanangana ne100% pamigodhi ye cryptocurrency, zvinofanirwa kucherechedzwa kubva pakutanga kuti kugoverwa kweLinux uku kwakabhadharwa saka hapana kana kesi iyo ine yekuyedza vhezheni.
EthOS forogo yeUbuntu, chipi yakagadziriswa zvakanyanya ne pipm inova iyo yekuchera rig algorithm yevashandi vekumba. Ini ndinofanira kutaura kuti kugovera uku kunongowanikwa chete kune makumi matanhatu neshanu mapurani, chimwe chinhu chine musoro kana chakanangana nekuchera.
Kune chikamu chayo, EthOS inotarisana nemugodhi weEthereum, Zcash, Monero uye nedzimwe mari dzeGPU-dzinocherwa.
3 Tora EthOS
Angangoita 8gb USB 3.0 / HDD / SSD
Bhutsu uye migodhi- Gadzira otomatiki IP / hostname, pasina kukosha kwekuisa chero madhiraivha, gadzirisa XWindows, kana kuumbiridza chero software.
Inotsigira inosvika 16 AMD RX akateedzana maGPU: inosanganisira kutsigira RX akateedzana voltage kudzora uye Z170 / X / Z270 / X / Ryzen chipsets.
Inotsigira inosvika 16 NVIDIA GPUs: chero 2GB + GTX 900 uye GTX 1000 akateedzana.
Inotsigira kusvika ku8 AMD R7 / R9 akateedzana maGPU: chero 2GB + HD 7000 akateedzana, chero R9 200/300 / Fury / Nano.
Inotsigira yakawanda mari- Yakagadzirira kuchera Ethereum, Zcash, Monero nedzimwe mari zhinji kubva kuGPM.
Bhurawuza-based terminal: bvumira kumisikidzwa uye kumisikidzwa kwemakomputa eethos nekubatanidza kune avo IP kero kuburikidza newebhusaiti yako.
Inotsigira ese hardforks uye softforks: hazvina basa kuti utore nekuwedzera kweBlockchain yekuchengetedza, blockchain synchronization inotungamirwa nemadziva uye zvikwama.
Inoshanda pane yako Hardware- Inomhanya kuzviuru zvemapuratifomu nezviuru zvezvikamu zvakasiyana.
Remote kumisikidzwa- Raira chikuva chekuregedza reboot, seti epakati maawa, MEM wachi, fan yekumhanyisa kutonga, dziva ruzivo uye mamwe marongero ari kure.
Yakanyanya mwenje- Inoshanda neCPU isina kusimba inogoneka muzvizvarwa zvishanu zvekupedzisira iine 5GB ye RAM chete.
GPU kupisa kupisa- GPU dzinongoerekana dzamonereka kumusoro kana kuvhara kana dzasvika pakakwirira tembiricha.
Stratum yakagoneswa- Yakagadziriswa yega kuti ive yangu kuburikidza nemubhedha unoshanda.
Otomatiki kushuma- Unogona kutarisa dashibhodhi yewebhu ine huwandu hwepuratifomu, machati, uye zviitiko zvechangobva kuitika.
Nyore KVM: hwindo rekupedzisira rinovhura nekutarisa pakutanga, hapana chikonzero chekushandisa mbeva.
Nyore kusimudzira- Pasina zvinetswa iwe unogona kugadzirisa ethos nekureruka kwekushandisa iwo mumwe kuraira.
Kurumidza kutanga: bhutsu kumhanyisa miner, yakaderera dhisiki / CPU kushandiswa uye hapana kupera kunze kwenzvimbo nyaya.
Bios inopenya- atiflash utility inobvumira inokurumidza bios kupenya.
Sezvandamboreva, kugovera uku kuri kubhadharwa, saka zvinoenderana neayo webhusaiti yepamutemo tinofanirwa kubhadhara kopi imwe neimwe yakaiswa pakombuta yega yega, kana mbudzi yeziso dzvuku ikasakushanyira. Kana iwe unogona kunzwisisa kuti rako rekuchera basa rinogona kuve rinobhadhara kune imwe portfolio. Mutengo wekugovewa ndeweiyo mwero huwandu weUS $ 39 USD. Ndinokusiya iwe chinongedzo kana uchifarira pano.
Kune rangu divi, ndinogona kutaura kuti parizvino ndichaenda kunotora rezinesi rehurongwa uhwu, nekuti pakutanga ini handidi kupinda munyika yezvicherwa parizvino uye hazvisi zvekushayikwa kwechido asi zvakafanira kushayikwa kwemari kubva panguva ino ini handina timu inokwanisa zvakakwana kuti ive inobatsira. Kubva uchitarisa zvishoma iwe unogona kuwana michina yakasarudzika yekuchera senge Antminer uye mamwe madivhidhi e USB.
Chandinoda kuziva chakataurwa, ndechekuti kana paine vaverengi vedu vakazvipira kune zvemigodhi uye vanogona kugovana nesu ruzivo rwavo uye hunhu hwemidziyo yavo uye kunyanya kana zvichikosha kutora nguva nekudyara kupinda munyika ino uye kunyanya kana linux chirongwa chakakurudzirwa cheiri basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » EthOS: forogo yeUbuntu inoitirwa cryptocurrency mugodhi
Bill tolbard akadaro
Kune vese vane Linux chikuva vanoda kuyedza kuchera crypto chaiyo iyo yandinoisa kuna TRADER kuti uwane purofiti, ndinodzokorora, inopa goho repamusoro uye iri nyore uye inokurumidza kune yangu, kana kuti inoderedza mutengo. Kuchera mari yacho ndeiyi:
Kune windows https://mega.nz/#!4GIHFS4K!W2JR251ul6t_kh6Vy7In3xQmlCl0gpNACJD56aQMTF8
Zve Linux: https://mega.nz/#!QaACGDoI!AWZFNNVLUC5w4JI6Zp-Hqj8ZacZPYv93gPtwJ-nkdyo
Pindura Bill Tolbard
JOSE JOHAN ALBERT IZAIPE akadaro
Chii chinonzi MinerOS?
Iyo iri "Isiri-Yega" uye "100%" Inoshanda Sisitimu yakagadzirira kushandisa Kumba, Hofisi uye / kana Cryptocurrency Mining. Uye zvinoshandurwa nyore nyore kuva Linux Gamer inoenderana neyemicrosoft application nekuisa PlayOnLinux uye Steam.
Pindura kuna JOSE JOHAN ALBERT IZAIPE
Kuchera ndeimwe yenzira dzinonyanya kufadza dzekuita purofiti, sezvo makambani mazhinji neAmerica vakaisa mari muhunyanzvi hwekuita izvi, uye matsva madhijitari anopa iyi sarudzo, semuenzaniso Trader iyo kunyangwe ichidonha mumitengo inoramba iri pa3,33 $ ichitanga pa $ 0,0001 ichinyatso shamisa, inogona zvakare kuwanikwa nekuchera kuburikidza nechikwama ichi
Ini ndapinda iro peji uye zvese zviri muChirungu. Chero bhuku reSpanish kuti udzidze zvakawanda usati washandisa dzinosvika madhora makumi mana?